Ukulahlekiswa izindlu abatyali-mali baguqukele British abasemagunyeni kuba uncedo - Sputnik Ngamazwe - Zonke Russian abaqondisi-mthetho ingaba apha! Oyena isemthethweni portal.
Ukulahlekiswa izindlu abatyali-mali baguqukele British abasemagunyeni kuba uncedo - Sputnik Ngamazwe
Iqela izindlu abatyali-mali abo ezilahlekileyo zabo imali kwi-zokuhlala iibhloko okokuba baba zange wakha sele wabuza British abasemagunyeni kuba uncedo, ngumthetheli kuba Usa ke embassy kwi-Moscow wathi ngolwesithathu
Ngaphezulu kwama- defrauded co-abatyali-mali ka-a real estate-mali ifemi, ezentlalo-ntle Phulo, zihlanganisene januwari kufutshane British embassy ukuba unikezelo ileta ukuze Prime Umphathiswa Tony Blair kunye isicelo ukunceda kubuyela zabo, imali, ethandwa kakhulu radio sovavanyo Ekho Moskvy wathi.
Ezentlalo-ntle Phulo lured amashumi amawaka-Russian abemi kunye isithembiso ukwakha entsha kwaye affordable izindlu. Ngokunxulumene co-abatyali-mali, imali kwi-akhawunti ka-owokuqala kweentloko Loluntu Phulo ingaba ekubeni transferred to-British iibhanki. I-co-abatyali-mali ngala ucela Isinhanha urhulumente ukukhangela kwaye freeze enjalo ii-akhawunti ngenxa yokuba le mali ngowethu Russians abathe zange wafumana zabo apartments. Isinhanha embassy ethe wafumana ileta kwaye transferred ngayo kwi-linalo igunya imizimba elondon kuba njalo, isithethi sathi. Ngonovemba, Moscow inkundla wabeka kweentloko Loluntu Phulo kwi-custody kwi suspicion ka-epheleleyo ubusela ka-co-abatyali-mali' imali.
Ngokunxulumene a esa kundoqo uphando, co-abatyali-mali ye-Loluntu Phulo utyale imali imali kwi- real estate iiprojekthi.
Ngaphezulu kwama, nama- kubo kuba sele ezenziwe sesi sibini lawsuits kukunceda kakhulu phezu yezigidi rubles ($.
Russia - Ufumane wokuqhawula umtshato Isiqinisekiso
Rusia Legalizes 'Poto-Nimbali' minangka Alesan Bener kanggo Gun Ngidini -senjata api Blog